Windows ကိုပိုကောင်းအောင် | November 2019
အဓိက Windows ကိုပိုကောင်းအောင်
Pagefile.sys ဖိုင်ကို - ကဘာလဲ? ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ရွှေ့ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဒီသေးငယ်တဲ့ဆောင်းပါးအတွက်ကျွန်တော်ဖိုင်ကို Pagefile.sys နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာပြပွဲဝှက်ထားလျှင် Windows တွင်ဖိုင်များ, ကိုတွေ့, ပြီးတော့စနစ် drive ကိုအမြစ်သို့ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ တခါတရံ၎င်း၏အရွယ်အစားမှာအတော်ကြာ gigabytes ရောက်ရှိနိုင်သည်! ဒါပေါ်ရွှေ့သို့မဟုတ်တည်းဖြတ်ရန်မည်သို့မည်ပုံလိုအပ်နှင့်အဘယ်ကြောင့်အတော်များများကသုံးစွဲသူများအံ့သြနေကြသည်။
External hard drive ကိုနှင့် Utorrent: အဝန်လျှော့ချရန်အဖြစ် drive ကို 100% ပိသလဲ?
နေ့သည်ကောင်းသော။ ယနေ့ပို့စ်ပြင်ပ HDD Seagate 2.5 1TB USB3.0 HDD ထံအပ်နှံသည်ကို (အရေးအကြီးဆုံးကတော့, မပင်ကိရိယာ၏မော်ဒယ်နှင့်၎င်း၏အမျိုးအစား။ ပို့စ်ပြင်ပ HDD အပေါငျးတို့သပိုင်ရှင်များမှအသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည်ဆိုလိုသည်မှာ) ။ အတော်လေးမကြာသေးမီကလမ်းဖြင့်, ဒီမော်ဒယ်၏စျေးနှုန်း 2700-3200 ရူဘယ်၏ဒေသတွင်း၌အချို့မြင့်မားတဲ့, ဒါကြောင့်ပူမဟုတ်ပါဘူး (ထို hard disk ကို၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
Windows 8 ကိုအတွက် update ကို disable လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ထို့နောက်အလိုအလျောက် update ကိုမလိုအပ်ပါဘူး disable - default အနေဖြင့် Windows 8 အလိုအလျှောက် obnovlenie.Esli ကွန်ပျူတာပုံမှန်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည်မရှိ, CPU အသုံးပြုမှုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်, နှင့်အထွေထွေထဲမှာအနှောက်အယှက်မပေးပါဘူး enabled ။ သို့သော်မကြာခဏအများအပြားသည်အသုံးပြုသူများဒီ setting ကို enable လုပ်ထားတဲ့, OS ကို၏မတည်မငြိမ်စစ်ဆင်ရေးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
အဆိုပါမော်နီတာမျက်နှာပြင်ရဲ့ resolution ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? အဆိုပါပေးနိုင်သောဆုံးဖြတ်ချက်ရွေးချယ်ခြင်း
နေ့သည်ကောင်းသော! တိကျတဲ့ဧရိယာမှပုံရိပ်ကိုအမှတ်အကြမ်းဖျင်းအရေအတွက်က - ... မျက်နှာပြင် resolution ကိုဘာမှနားလည် fit, ဒါကြောင့်သင်ကအကြောင်းပြောဆိုရန်စတင်မှီ, ငါမိတ်ဆက်စကား၏စကားအနည်းငယ်ရေးလိုက်ချင်မှအတော်များများကအသုံးပြုသူများသည်။ ပိုအချက်များ - ရုပ်ပုံပြတ်သားနှင့်ကောင်း၏။
အဆိုပါသန့်ရှင်းရေး + သင့်ကွန်ပျူတာကိုအရှိန်မြှင့်ပိုကောင်းအောင်များအတွက်အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်။ လက်တွေ့ကျတဲ့အတွေ့အကြုံကို
မင်္ဂလာပါ သူ၏ "စက်" ကိုတိုင်းကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူအိပ်မက်လျင်မြန်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်အမှားအယွင်းများခြင်းမရှိဘဲ။ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းစွာ, စစ်မှန်တဲ့လာအမြဲအိပ်မက်တော့မဟုတ်ပါဘူး ... အားလုံးအများစုဟာ, အဘရိတ်, အမှားအယွင်းများ, အချုပ်ခန်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ရှိသည်။ တင့်တယ်လှောင်ပြောင်သရော်မှုတွေ PC ကို။ ဤဆောင်းပါး၌သင်တို့ကိုငါတစ်ကြိမ်သာနှင့်အလုံးစုံတို့အဘို့ကွန်ပျူတာ၏ "အယှက်" ၏အများဆုံးဖယ်ရှားပစ်ရခွင့်ပြုထားတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အစီအစဉ်ကိုပြသချင်!
Windows7မှာ "ကျွန်မရုပ်ပုံများ" ဖိုင်တွဲ "My Documents", "Desktop" ကိုရွှေ့ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ပုံမှန်အားဖြင့်, "ကျနော့်ခဲ့သောဗီဒီယိုများ" ကိုမရှိသလောက်ရှိသည်, "ကျနော့်ရုပ်ပုံများ" ဖိုင်တွဲ "My Documents", "Desktop" ကိုရွှေ့။ အများစုကတော့အသုံးပြုသူများရိုးရှင်းစွာသောဤဖိုင်တွဲများ၏လှုပ်ရှားမှုတစ်ဦးအမြန်ရည်ညွှန်းလမ်းညွှန်၏အသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြုပါဦးမည်, သို့သော် disc ကိုဃအပေါ်သီးခြားဖိုင်တွဲများအတွက် file တွေကိုသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်, ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအလွန်လျင်မြန်နဲ့ Windows7မှာလွယ်ကူပါတယ်။
ညှိဖို့ဘယ်လို windows 8 အတွက် startup Programs ကို?
Operating System ကို Windows မှာ 2000 မှနေသားတကျသူ Windows8 ကိုပြောင်းရွေ့သည့်အခါ XP, 7, - ရိုးသားဖို့, ခလုတ် "Start" နှင့် Startup tab ကိုသည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးအလင်းဆုံးရှုံးမှုအတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ avtozagrzki မလိုအပ်တဲ့ပရိုဂရမ်ကနေ add (သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်) အားယခုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသနည်း ဒါဟာ startup ပြောင်းလဲပစ်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်ကို Windows 8 မှာပေါ်လာသည်။
ဝှက်ထားသော system files ကိုဖော်ပြရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ Windows operating system ကိုဝှက်ထားသော system files ကိုကြည့်ရှုရန်စွမ်းရည်ကိုပိတ်ထား။ ဒါဟာမတော်တဆဖျက်သို့မဟုတ်အရေးကြီးသော system files ကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းကနေအတွေ့အကြုံအသုံးပြုသူများထံမှကို Windows ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို secure နိုင်ရန်အတွက်ပြုလေ၏။ တစ်ခါတစ်ရံသော်လည်း, သင်က hidden system files ကို, သန့်ရှင်းရေးဘို့ဥပမာများနှင့်အကောင်းဆုံးကို Windows ကိုမြင်ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Disc ကိုသန့်ရှင်းရေးနှင့်တစ်ဦးအချည်းနှီးသောထိုင်ခုံပေါ်မှာတိုးမြှင့်ဖို့ဘယ်လို drive ကို C. အပေါ်နေရာမလုံလောက်?
နေ့သည်ကောင်းသော! မှားယွင်းနေသည် type ကို "မလုံလောက်သော disk space ကိုပုကို C" - - ဖြစ်မည်ဟု, မူအရ, မဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဒါဟာလက်ရှိ HDD စွမ်းရည် (500 GB ကိုသို့မဟုတ်ပျမ်းမျှအားပိုမို) အရကြောင်းယ့်ပုံပဲ ဒါပေမယ့်ဒါမဟုတ်ပါ! အတော်များများသည်အသုံးပြုသူများကို install အခါ operating system ကိုသေးငယ်လွန်းသည့်စနစ် disk ကိုအရွယ်အစားကိုသတ်မှတ်, ပြီးတော့သူအပေါငျးတို့သ applications များနှင့်ဂိမ်းများသတ်မှတ် ... ဤဆောင်းပါး၌ငါအတော်လေးလျင်မြန်စွာမလိုအပ်တဲ့ Junk ဖိုင်တွေထဲကထိုကဲ့သို့သောကွန်ပျူတာနှင့်လက်တော့ပ်အပေါ်တစ်ဦး disk ကို drive ကိုသန့်ရှင်းရေးကိုဘယ်လိုမျှဝေချင် (ထိုအသုံးပြုသူများနှင့် ) ခန့်မှန်းကြဘူး။
သန့်ရှင်းရေးနှင့် registry ကို defragment လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့ကိုပထမဦးဆုံးသောအရာကိုတစ်ဦး registry ကိုကျနော်တို့ကလိုအပ်တယ်အဘယ်ကြောင့်ကောင်းစွာ, ထို့နောက်များနှင့်မည်သို့စနစ်တကျသန့်ရှင်း Defrag က၎င်း၏အလုပ် (အရှိန်မြှင့်) နားလည်ကြကုန်အံ့။ Registry ကို - ဤကအစီအစဉ်များကိုသူတို့ရဲ့ setting များကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားတဲ့အတွက် setting များ၏အစု, ယာဉ်မောင်းနှင့်ဖြစ်ကောင်း, ယေဘုယျအားဖြင့်အားလုံးန်ဆောင်မှုများသိုလှောင်ထားတဲ့အတွက်အကြီးအက Windows OS ကိုဒေတာဘေ့စဖြစ်ပါတယ်။
Windows7မှာ hidden ဖိုင်တွဲများ
အတော်များများကအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူများကိုသင်အလွယ်တကူနဲ့ရိုးရိုးမျက်စိ prying ကနေဖိုင်တွဲတွေနဲ့ဖိုင်တွေကိုဝှက်ထားလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုသိကြပါဘူး။ သင်တစ်ဦးကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်အချို့အပေါ်အလုပ်မလုပ်လျှင်ဥပမာ, ထိုကဲ့သို့သောတိုင်းတာထွက်ကိုကူညီကောင်းတစ်စိတ်ကူးရှိနိုင်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, အထူးအစီအစဉ်ကိုသင်ပုန်းရှောင်ခြင်းနှင့်ထား folder တစ်ခုပေါ်မှာ password ကို, ဒါပေမယ့်အမြဲအပိုဆောင်း software ကို (ဥပမာ desktop ကွန်ပျူတာ) ကိုတပ်ဆင်ရန် option ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးနိုင်ထက်အများကြီးပိုကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
မှုကို C drive ကို disk ကို: D တိုးမြှင့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
မင်္ဂလာပါချစ်လှစွာသောစာဖတ်သူများ pcpro100.info ။ - စနစ်တစ်ခု partition ကိုကို C (ပုံမှန်အား 40-50gb မှ): သင်က Windows system ကို install လုပ်သည့်အခါအများဆုံးသုံးစွဲသူများကနှစ်ခု partitions ကိုစ hard disk ကိုဝေဖန်လော့။ သာ operating system နဲ့အစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းလေ့ရှိတယ်။ : D (ဒီ hard drive ထဲမှာအားလုံးကျန်ရှိနေသေးသောအာကာသပါဝင်သည်) - ဒီ disk ကိုစာရွက်စာတမ်းများ, ဂီတ, ရုပ်ရှင်, ဂိမ်းများနှင့်အခြားဖိုင်များကိုအသုံးပြုသည်။
တစ်ဦး hard drive ကို format လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးဖိုင်ပေါ်လာမတိုင်မီမည်သည့် hard drive ကိုမဆိုလမ်းထဲမှာဒီမပါဘဲ, ချပ်ရမည်ဖြစ်သည်! operating system ကိုပြန်လည်အခါအသစ်ပေမယ့် corny အခါယေဘုယျအားဖြင့်ပုံစံ hard drive ကိုအမှုများစွာရှိသာအစအဦး၌ပြစ်မှားမိသည်ကိုသင်လျင်မြန်စွာဒါပေါ်တွင်သင်ဖိုင်ကို system ကိုပြောင်းလဲပစ်ချင်သည့်အခါ disk ထဲကဖိုင်တွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါနှင့်ရန်လိုအပ်သည့်အခါ။
သင်၏ Windows 8 အကောင့်စကားဝှက်တစ်ခုသတ်မှတ်ပေးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဖြစ်ကောင်းလူတိုင်းအတိုကောက် PC ကိုဘာသာပြန်ဘယ်လောက်သိတယ် - ကိုယျပိုငျကှနျပြူတာ။ လူတစ်ဦးချင်းစီကိုလူတိုင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဖိုင်များ, သူအခြားသူများကိုပြသချင်မဟုတ်ကြောင်းဂိမ်းရှိပါတယ်, သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ငန်းလည်ပတ် settings ကိုရပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာသော့ချက်စာလုံး, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ သောကြောင့် ကွန်ပျူတာကိုမကြာခဏတော်တော်များများလူတွေအသုံးပြုပါကတစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူများအတွက်အသုံးပြုသူအကောင့်ရှိပါတယ်။
Long ကကွန်ပျူတာကိုဖွင့်သည်။ အဘယ်သို့ပြုသနည်း
နှောင့်နှေးမ, အစာရှောင်ခြင်းအားဖွင့်, program ကိုရိုးရှင်းစွာ "ပျံသန်း": သူ့စတိုးဆိုင်ထဲကယူဆောင်ခဲ့သည့်အခါဖြစ်ကောင်းလူတိုင်းအတွက်, သူတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာအလုပ်လုပ်ပုံကိုအောက်မေ့။ ပြီးတော့တစ်ဦးအနေဖြင့်အပြီး, ကပြောင်းလဲပြီပုံ - ကတဖြည်းဖြည်းအလုပ်လုပ်တယ်, ရှည်လျား Hang, စတာတွေဖွင့် ဤဆောင်းပါး၌ငါကွန်ပျူတာအချိန်ကြာမြင့်စွာဖွင်, ဤသူအပေါင်းတို့ပြုသောအမှုနိုင်အဘယ်ကြောင့်၏ပြဿနာဖြေရှင်းချင်တယ်။
NTFS မှ FAT32 ကနေ file system ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဤဆောင်းပါးသည်ကိုသင် drive ကိုပေါ်မှာရှိသမျှ data တွေကိုမပျက်မယွင်းဆက်လက်တည်ရှိမည့်အရာ, ထိုနည်းတူ NTFS, ရန် FAT32 ဖိုင် system ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုဘယ်လိုကြည့်ရှုမည်! ကျွန်တော်တို့ကိုသစ်တစ်ခု file system ကိုပေးတော်မူမည်အဘယ်အရာကိုသတ်မှတ်စတင်, ဘာကွောငျ့လဲရန်လိုအပ်သည်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောအရည်အသွေးမြင့်အတွက်ရုပ်ရှင်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကို DVD disc ကို၏ပုံရိပ်ကိုအဖြစ်,4GB ကိုထက်ပိုကြီးတဲ့ဖိုင်တစ်ခုဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုဆိုပါစို့။
ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာရှိသမျှစာဖတ်သူများမှနှုတ်ခွန်းဆက်! ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း, သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် "အမိန့်" နဲ့လိုက်နာကြဘူးလျှင်အဖြစ် - ကမလိုအပ်တဲ့ဖိုင်တွေ (တစ်ခါတစ်ရံ junk အဖြစ်ရည်ညွှန်း) ၏တွေအများကြီးပုံပေါ်ပါတယ်။ ဝဘ်စာမျက်နှာများကိုကြည့်ရှုလျှင်ပင်သူတို့က, ဟုတ်ကဲ့, ဂိမ်းများ, သင်အစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာဥပမာ, ပေါ်လာ! အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, စကားမစပ်အဲဒီ Junk ဖိုင်များကိုအလွန်အကျွံစုပြုံလျှင် - ကွန်ပျူတာ (သင့်အဖွဲ့သည် running မတိုင်မီစက္ကန့်အနည်းငယ်စဉ်းစားရန်လိုလျှင်ကဲ့သို့) နှေးကွေးစတင်လိမ့်မည်။
က virtual memory ကိုနှင့် swap ဖိုင်တိုးမြှင့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အတူစတင်, သငျသညျအတိုချုပ်ကို virtual memory နဲ့ paging ဖိုင်များ၏ concept ကိုရှင်းပြသင့်တယ်။ page file - ကအလုံအလောက် RAM ကိုမဖြစ်သည့်အခါကွန်ပျူတာကအသုံးပြုကြောင်း Hard disk space ကို။ virtual memory - RAM နှင့် swap ဖိုင်ပမာဏဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Windows ပေါ်မှာသင့်ရဲ့မရှိပါဘူးသော partition ကိုပေါ် paging ဖိုင်နေရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
Windows ကိုအတွက် Startup programs တစ်ချို့ disable လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ကွန်ပျူတာပေါ်မှာတစ်ခုချင်းစီကိုအသုံးပြုသူအစီအစဉ်များများစွာ installed ။ လူအပေါငျးတို့သရွေ့ဤအစီအစဉ်များအချို့ startup ထဲမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့မှတ်ပုံတင်ရန်စတင်ကြဘူးအဖြစ်ပြုလိမ့်မည်။ နောက်ထပ်, etc, ကွန်ပျူတာ, ဘရိတ်ပေါ်လာဖို့စတင်ဖွင်သည် PC ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာတင်ဆောင်သည်အမျိုးမျိုးသောအမှားများကိုထွက်ရသည့်အခါ သငျသညျအလွန်မကြာခဏလိုအပ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လှည့်တစ်ဦးချင်းစီအချိန် load - - ဒါဟာ startup ထဲမှာပရိုဂရမ်အတော်များများကြောင်းယုတ္တိဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်မလိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။
https://termotools.com my.termotools.com © Windows ကိုပိုကောင်းအောင် 2019